रुसमा रोबर्ट बेश्यालय सञ्चालन – आइसिटी खबर:सूचना सञ्चार तथा प्रविधि खबर ICT Khabar.com : No.1 Tech INFO ICT News Site
2076 साउन १ गते देखि इन्टरनेटको शुल्क १३ प्रतिशत बढ्ने
फेसबुकलाई ठूलो जरिवाना, वार्षिक नाफाको एक चौथाइ तिर्नुपर्ने
इरानमा अमेरिकाद्वारा साइबर आक्रमण
प्रहरीले फेसबुकबाटै सोधपुछ ! सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैको चरित्र हत्या गर्नु कानुन विपरित
फोनमा ‘हेल्लो’ भन्ने चलन कसरी चल्यो ?
२५ डलरको कम्प्युटरबाट नासामाथि साइबर हमला
क्यामेराले यसरी नाप्दैछ ब्रह्माण्ड
फेसबुक लाइभ गर्दै हुनुहुन्छ ? अब सचेत हुनुहोस्
संसारकै भाइरसयुक्त ल्यापटप लाखौँ डलरमा बिक्री
Home / आइसिटी न्युज/टेक अपडेट / रुसमा रोबर्ट बेश्यालय सञ्चालन
रुसमा रोबर्ट बेश्यालय सञ्चालन
ICT Khabar/आइसिटी खबर October 25, 2018	आइसिटी न्युज/टेक अपडेट, प्रविधि विश्व, लाइफ स्टाइल Leaveacomment 552 Views
रुसको राजधानीमा एउटा रोबोट वेश्यालय खुलेको छ, यहाँ रोबोटलाई सेक्स डलको रूपमा सेवाका लागि राखिएको छ । यो रुसको पहिलो यस्तो वेश्यालय हो जहाँ रोबोटहरूले सेवा प्रदान गर्ने छन् ।
प्रकाशित समाचार अनुसार सेक्स डल म्युजियमका नामले संचालित स्पेन र इटालीका ती वेश्यालयभन्दा मस्कोमा खुलेको वेश्यालय धेरै कुराले भिन्न रहेको बताइएको छ ।
यहाँ राखिएका सेक्स दलहरूको तापक्रम नियन्त्रण गर्न सकिने र यिनको गुप्ताङ्गमा समेत तापक्रम नियन्त्रण प्रणाली रहेको बताइएको छ । यति मात्र नभएर यी डलहरूले ग्राहकहरूको इच्छा अनुसार ‘फोहोर कुरा’ समेत गर्न सक्छन् ।
अर्थात कुनै ग्राहकले यिनीहरूसँग ‘फोहोर कुरा’ गर्न चाहेको खण्डमा यिनीहरूले त्यसो समेत गर्न सकिने गरेर यिनीहरूलाई निर्माण गरिएको छ । समाचारहरूमा जनाइए अनुसार ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’बाट संचालन हुने यी डलहरू अंग्रेजी र चिनियाँ भाषामा कुरा गर्न सक्छन् ।
त्यसका साथै यिनीहरूलाई लचकदार बनाइएकाले ग्राहकले चाहेको आसन समेत उपलब्ध गराउन तिनीहरू सक्षम रहेको जनाइएको छ । स्थानीय मिडियाका अनुसार यी डलहरूको नाम ‘एमा’ राखिएको छ र ५ फीट ४ इन्च अग्ला यिनीहरूलाई ग्राहकले छुँदा यिनले प्रतिक्रिया दिने गरेको बताइएको छ ।
तर समाचारहरूमा यस्तो सेवा लिन चाहने ग्राहकले भने निकै ठुलो रकम खर्च गर्नु पर्ने जनाइएको छ । यस्ता डलहरूसँग एक घण्टा समय बिताउन ८० डलर खर्च गर्नु पर्ने छ जुन नेपाली मुद्रामा लगभग साढे नौ हजार हुन आउँछ ।
Previous सामाजिक सञ्जालको कुलत लागुऔषध भन्दा भयानक !
Next नयाँ फोन बेच्न सामसङ र एप्पलले ग्राहकको स्मार्टफोन स्लो बनाइदिन्छन्
प्रहरीको काम सामाजिक सञ्जालका स्टाटसमाथि अनुसन्धान गर्ने मात्रै हुँदैन । कतिपय घटनामा सामान्य विषयमा अनावश्यक ...
Digital ICT Media द्वारा प्रकाशित (http:/ictkhabar.com) अनलाइन दर्ता नं : ५०८ /०७४- ०७५ प्रबन्ध निर्देशक/सम्पदक : सावित्रि वस्नेत ठेगाना : मनमैजु 19, काठमान्डौ, नेपाल प्रधान सम्पादक : भरतराज उप्रेती Email : weeklyictnews@gmail.com/digitalictmedia@gmail.com Contact No. (सम्पर्क नं. 9841577970, 9851093493)